कोरोनाको दोस्रो लहरबाट परिवार नै सखाप ! – Ap Nepal
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट परिवार नै सखाप !
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट प्रभावित भा’रतीय नागरिक त्रा’हीत्रा’ही छन् । उपचारका लागि अस्पताल गएकाहरु अक्सिजन न’पाएर छ’टपटाउँदै ज्यान गु’माइरहेका छन् । ला’सहरुको चा’ङले अ’न्त्येष्टि गर्न पा’लो कुर्नुपर्ने स्थिति छ । श’व ज’लाउने काठ अ’भाव भएपछि चिनी उद्योगमा पे’लेका उँखुका डाँ’ठ खो’साखास गर्नुपर्ने बा’ध्यता छ ।
यहीबीचमा महाराष्ट्र राज्यको पुणेमा कोरोना संक्रमित एकै परिवारका चार जनाले आठ दिनको अ’न्तरमा ज्यान गु’माएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । मृ’त्यु हुनेमा आमा–बुवा र उनीहरुका दुई छोरा छन् । परिवारमा बाँकी एकमात्र सदस्य बुहारीको ग’म्भीर अवस्थामा उपचार जारी छ ।
भा’रतीय मिडिया दैनिक भास्करका अनुसार मृ’त्यु हुनेमा पुणेको ह’डपसर इ’लाकामा बस्दै आएका आमा सुमन को’चेकर, उनका पति लक्ष्मण तथा छोराहरु श्यामसुन्दर र विजय छन् ।उनीहरु एउटै घरमा बस्दै आएका थिए । तर बेड अ’भावमा उनीहरुको अ’लग–अलग अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो ।
डाक्टरहरुका अनुसार सबैभन्दा पहिले सु’मनको १६ अप्रिलमा मृ’त्यु भएको थियो । त्यसको ६ दिनपछि उनका पति लक्ष्मणको मृ’त्यु भएको थियो । त्यसपछि छोराहरु श्यामसुन्दर र विजयले पनि संसार छाडे ।श्या’मसुन्दरकी प’त्नीको ग’म्भीर अवस्थामा उपचार जारी छ ।
उनको फो’क्सोको ५० प्रतिशत भागमा संक्रमण भएको डाक्टरहरुको भनाइ छ ।पुणे जिल्लाका अस्पतालहरुमा एक लाख १६ हजार कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ । हालसम्म ११ हजार ७८० जनाको मृ’त्यु भइसकेको छ । जिल्लामा मृ’त्यु दर १.५४ प्रतिशत र संक्रमणबाट मु’क्त हुने दर ८५.११ प्रतिशत रहेको छ ।
Prevसन्तोष देउजाको दुवै मिर्गौलामा सम,स्या , भाबुक हुदै सबैलाई दिए यस्तो सन्देश (भिडियो सहित)
Nextबढ्यो डलर सहित आज यी बिदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुस कुन देशको कति ?